केसीको अनशन २४ औँ दिनमा ,अहिलेसम्मकै लामो अनशन | Alagdhar
घरBanner Newsकेसीको अनशन २४ औँ दिनमा ,अहिलेसम्मकै लामो अनशन
केसीको अनशन २४ औँ दिनमा ,अहिलेसम्मकै लामो अनशन
काठमाण्डौ । चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेका डा. गोविन्द केसी पछिल्लोपटक अनशन बसेको आज २४ दिन भएको छ । संसदमा पेश भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा माथेमा आयोग अनुसार तयार भएको अध्यादेशको भावना तोडमोड गरिएको विरोधमा डा. केसीले यसपटक सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् । उनले २४ दिनअघि जुम्ला पुगेर अनशन सुरु गरेका थिए । तर स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएपछि सरकारले जोडबल गरेर डा। केसीलाई गएको बिहीबार काठमाडौँ ल्याएको हो । उनी अहिले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनशनमा छन् ।
उनले स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिए पनि कुनै किसिमको स्वास्थ्य सेवा लिन अस्वीकार गरेका छन् । उनको मागको पक्ष र आन्दोलनको समर्थन तथा जीवन रक्षाका लागि नागरिक समाजका अगुवा तथा समाजका प्रवुद्ध समूह पनि आन्दोलनमा छन् । दैनिकजसो डा. केसीको समर्थन तथा माग पूरा गराउनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले काठमाण्डौसहितका ठाउँहरुमा प्रदर्शन हुने गरेका छन् । उनले उठाएका मागमा एक्यवद्धता जनाउे क्रम बढीरहेपनि वार्ता भने अनिश्चित बनेको छ ।
डा. केसीले यसअघि १४ पटक अनशन बसिसकेका छन् ।डा. केसी १५ औँ पटकको अनशनमा रहँदा पनि उनका माग लगभग उस्तै छन् । यसअघिका अनशनमा डा. केसीले २३ दिनभन्दा बढी कटाएका थिएनन् । तर यो पटक भने उनको सत्याग्रह लामो भएको छ । सरकारसँगको वार्ताले अझै आकार लिन सकेको छैन । सोमबार पनि वार्ता हुने वा भए पनि सहमतिमा पुग्ने सम्भावना देखिएको छैन । सरकार उनका मागमा गम्भीर नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
यसले गर्दा डा. केसीको यो पटकको सत्याग्रह यसअघिका भन्दा लामो बन्दै गएको छ र उनको स्वास्थ्यमा थप समस्या देखिन थालेका छन् ।
यता सरकारले अनसन तोडेर वार्तामा आउन डा. केसीलाई सन्देश पठाएको छ । बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार केसीले अनसन तोडे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले सीधै वार्ता गर्ने सम्भावना छ । यसअघि पटकपटक सहमति भए पनि समस्याको समाधान नभएपछि प्रधानमन्त्री आफैंले डा. केसीसँग वार्ता गर्ने मनस्थिति बनाएका हुन् । यसबारेको सन्देश डा. केसीलाई पठाए पनि डा. केसीले जवाफ नपठाएको स्रोतको भनाई छ ।
अघिल्लो लेखमाविश्वकै शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी बन्ने अवसर नगुमाउ ; अध्यक्ष दहाल
अर्को लेखमाकायममुकायम प्रधानन्यायाधिश जोशीमाथि परेको उजुरीमाथि छानबिन सुरु